Al-Shabaab oo Hanjabaad culus u jeedisay Maamulka Madaxweyne Faroole ee Puntland iyo halista amni ee ka soo fool-leh | Berberanews.com
Home WARARKA Al-Shabaab oo Hanjabaad culus u jeedisay Maamulka Madaxweyne Faroole ee Puntland iyo...
Al-Shabaab oo Hanjabaad culus u jeedisay Maamulka Madaxweyne Faroole ee Puntland iyo halista amni ee ka soo fool-leh
Ceelasha-Biyaha-(Berberanews)- Kooxda Al-Shabaab oo bilihii u dambeeyey inta badan Koonfurta iyo badhtamaha dalka Soomaaliya oo ay awood badan ku lahaayeen lagaga xoog-roonaday, ayaa maamulka Madaxweyne Cabdiraxmaan Sheekh Maxamed Faroole ee maamul-goboleedka Puntland ugu hanjabay inay cagta marin doonaan, isla markaana wax ay ugu yeedheen dulmi uu ku hayo shacabka gobolladaas ka fujin doonaan.
Afhayeenka Malleeshiyada Al-Shabaab oo ka tirsan Shabakadda Al-Qaacida Cali Maxamuud Raage (Cali-dheere), oo shir jaraa’id ku qabtay deegannada loo barakacay Ceelasha Biyaha ee duleedka magaalada Muqdisho, ayaa ugu horreyn ka hadlay safarro uu sheegay in uu ku soo maray dhowr gobal oo Al-Shabaab laga qabsaday badankood horaantii sannadkan.
Wuxuu sheegay in dhawaan goballadaas ay ku soo noqon doonaan gacanta Al-Shabaab. Sidoo kale wuxuu ka hadlay Cali-dheere, wararka sheegaya in Al-Shabaab ay u carareen Buuraha Gal-gala ee gobalka Bari ee Puntland oo ka tirsan Silsiladda Buurladayda Golis markii lagaga awood roonaaday dagaallada Koonfurta ay ka wadeen.
Afhayeenka Al-Shabaab wuxuu sheegay in warkaasi uu yahay mid dacaayad ah oo warbaahinta u adeega cadowga Al-Shabaab ka horjeeda ay buunbuuniyeen, laakin wali Al-Shabaab ku sugan yihiin koonfurta iyo badhtamaha Soomaaliya. Waxaanu Cali-dheere ku hanjabay inay cidhib-tiri doonaan Maamulka Puntland deegannada uu ka arrimiyo, isagoo sheegay in sababaha keenay in ay hadda tagayaan deegannada Puntalnd ay tahay, siddii ay uga weecin lahaayeen dadka ku dhaqan halkaas dhibaato uu sheegay in Maamulka Faroole ku hayo dadka reer Puntland.
”Al-Shabaab awood ayey u leedahay in ay maamulkeeda geyso Puntland, maxaa-yeelay? Annagoo halkan ku sugan ayaa haddana maamulkeennu uu tagi karaa Puntland…Waxaan leeyahay dadka reer Puntland waan ognahay dhibaatada uu idinku hayo maamulka Faroole, oo dhibaateeya dadka Islaamka ah. Sidaa darteed, annaga ayaa soo gaadhi doonaan Puntland.” Sidaa ayuu yidhi Afhayeenka Kooxda Al-Qaacida ka tirsan ee Al-Shabaab.
Madaxweynaha maamulka Puntland Cabdiraxmaan Faroole, ayaa dhawaan sheegay in deegannada Puntland ay u soo qaxeen Malleeshiyada Al-Shabaab ka dib markii ay ku wiiqmeen dagaalladii Koonfurta iyo badhtamaha Soomaaliya ka wadeen sannadihii u dambeeyey. Hase-ahaatee Faroole waxa uu sheegay in Puntland diyaar u tahay sidii ay ula dagaallami lahayd Al-Shabaabta u soo qaxaysa deegaannada Puntland, gaar ahaan sida uu sheegay Buurta Galgala oo ay sannadkii hore Puntland kula dagaallami jirtay Koox ka tirsan Al-Shabaab oo uu hoggaamiyo nin lagu magacaabo Sh. Maxamed Siciid Attam oo dhalasho ahaan deegaankaa ka soo jeeda.
Qaramada Midoobay iyo dawladda Somaliland, ayaa iyaguna toddobaadkan ka hadlay halista nabadgelyo-darro ee ka iman karta Kooxda Al-Shabaab ee u soo qaxaysa, isla markaana doonayso inay Saldhigyo Millateri ka samaystaan Buuralayda Golis ee Galgala iyo nawaaxigeeda, taasoo Madaxweynaha Somaliland golaha ammaanka ka dalbaday si halista amni ee Al-Shabaab ka soo fool leh looga hortago in Cuna-qabataynta Hubka ee Soomaaliya saaran tan iyo 1993-kii laga qaado.
Previous articleMadaxweynihii Liberia oo Maxkamadda Dembiyada Dagaalka ee Hague ay ku Heshay dembiyo dagaal
Next articleWar crimes court finds Charles Taylor guilty